PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-26 - ABAHOLI KUGCOTSHWA OWE-MUT
ABAHOLI KUGCOTSHWA OWE-MUT
KULETHE intokozo nomunyu ukugcotshwa kukavice Chancellor wemangosuthu University of Technology (MUT) obekuhambisana nokuvulwa komthombo wesikhumbuzo sikamufi unkz Zolile Khumalo owayefunda khona, wabulawa ngowayeyisoka lakhe nonyaka.
Uvice Chancellor udkt Duma Malaza ugcotshwe ngodumo nguShansela wale nyuvesi unkz Lindiwe Sisulu, kugcwele izikhulu zamanye amanyuvesi nomsunguli waso inkosi Mangosuthu Buthelezi.
Udkt Malaza unconywe nguNgqongqoshe wezemfundo ephakeme unkk Naledi Pandor, wathi uyamethemba ukuthi uzosibeka ezingeni lesi sikhungo njengoba enazo zonke iziqu ezimvuna ukuba asiphathe.
Umphonsele inselelo yokuthi aqede umlando omubi wale nyuvesi wokuduma ngemibhikisho nangezibhelu.
Uthe okuyomenza asebenze kahle nangempumelelo ukuba asebenzisane nabo bonke abathintekayo kulesi khungo, angazithatheli izinqumo yedwa.
Inkosi Buthelezi ibiphuphuma intokozo ukubona kufezeka iphupho layo lokukhula kwalesi sikhungo.
Ithe kuyayithokozisa ukuthi sesiwumthombo ophuzisa izizwe okwakuyinhloso yayo ngesikhathi inxusa usozimali umnu Harry Openheimer nowakwakhe unkk Bridgett Openheimer ngo-1979 ukuba banikele kwakhiwe isikhungo semfundo ezofundisa intsha amakhono kunokufunda izifundo ezingaciji kwezamakhono.
Uthi banikela ngo-r5 million sakhiwa lesi khungo. Wazama neminye iminikelo, saqala ngabafundi abayi-15 nje kuphela. Ufisele udkt Malaza ukuba asiphathe kahle isikhungo, wathi uyamethemba.
Unkz Sisulu, ehlangana okokuqala ngqa nabazali bakaZolile, umnu Comfort Khumalo nonkk Philisiwe Khumalo, ukhalisane nabo kakhulu, ebatshela ukuthi uzwa ubuhlungu obungakanani ngokwabehlela belethe indodakazi yabo esikoleni kanti isizobulawa kalula nje.
BEKUPHUME nabaholi emcimbini obusemut izolo. Kusukela kwesokunxele ngungqongqoshe wezemfundo ephakeme kuleli unkk Naledi Pandor, Nkk Philisiwe Khumalo (unina kazolile), Nkz Lindiwe Sisulu (Chancellor) inkosi Mangosuthu Buthelezi, novice Chancellor Duma Malaza ophethe IMUT.